पाँचथरको आरुबोटेमा दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या ! « Nepal Bahas
पाँचथरको आरुबोटेमा दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या !
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:५४
१२ वर्षीया सीता खजुम भने भागेर बाँच्न सफल भएकी छन् । उनी गम्भीर घाइते छिन् ।मध्यरात भएको घटना स्थानीयवासीले बिहान मात्रै थाहा पाएका थिए । घाइते सीताले स्थानीयवासीलाई दिएको जानकारीअनुसार मुखुण्डो लगाएर आएको समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरी सबैको हत्या गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर नेतृत्वको टोलीसमेत घटनास्थलमा पुग्न लागेको पौडेलले जानकारी दिए । इलाका प्रहरी कार्यालय रविबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ ।
कोहलपुरमा ट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु
जाडो छल्न तापेको आगोले जलेर एक वृद्धाको मृत्यु